वस्तु स्थितिपट्टीमा हालको कागजातको बारेमा सूचना समावेश हुन्छ र विशेष कार्यहरू सहित विभिन्न वटनहरू प्रस्तुत गर्दछ ।
हालको पृष्ठ सङ्ख्या यो फाँटको स्थितिपट्टीमा प्रदर्शन हुन्छ. दोहोरो-क्लिकले नेभिगेटर खोलिन्छ, जसबाट तपाईँ कागजातलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ. दायाँ-क्लिकले सबै पुस्तकचिनोहरू कागजातमा देखाउँछ. पुस्तकचिनो क्लिक गर्नुहोस् पुस्तकचिनो स्थानमा कर्सर राख्नका लागि.
हालको पृष्ठ शैली
यदि हार्ड ड्राईभमा अहिले सम्म कागजातमा गरिएको परिवर्तनहरू बचत नगरिएको भए,स्थितिपट्टीको यो फाँटमा एउटा "*" प्रदर्शित छ। यो नयाँका लागि पनि लागू हुन्छ,बचत गरिएको कागजातमा अहिले होइन।
सक्रिय कागजातको बारेमा हालको सूचना प्रदर्शन गर्नुहोस्.
हालको पृष्ठ प्रदर्शन जुम तत्व वर्णन गर्दछ।
Title is: वस्तु स्थितिपट्टी